हिन्दूहरूको महान् चाड दसैं नजिकिँदो छ । दसैंमा प्रत्येक मानिसले आ–आफ्नै तरिकाले योजना बनाएका हुन्छन् । कसैको योजना किताब पढ्ने हुन्छ भने कसैको योजना साथीभाईसँग भेट गरी रमाइलो गर्ने हुन्छ । कतिले पीङ खेल्ने योजना बुन्छन् भने कतिले तास खेल्ने ‘प्लान’ गरेका हुन्छन् ।
अझ, कलाकारहरूको दसैं योजना भने बृहत नै हुन्छ । उनीहरूले दसैंमा आफ्ना लागि मात्र नभएर दर्शक तथा स्रोताका लागि पनि योजना बुन्नु पर्छ । आफ्ना नातागोतामा मात्र नभएर दर्शक तथा स्रोताका लागि पनि समय छुट्याउनु पर्छ । कलाकारहरू दसैंमा कुनै कार्यक्रममार्फत् दर्शक एवम् स्रोतासँग जोडिन्छन् र आफ्ना प्रस्तुतीको सहायताले शुभकामना आदानप्रदान गर्छन्, खुशी साटासाट गर्छन् ।
तर, जे होस् । यी सबैको योजनामा एउटा योजना चाहिँ हुबहु सबैको मिल्छ । त्यो हो, दसैंको मौका पारेरे आफ्ना साथीभाई, नातागोता र इष्टमित्रसँग भेटघाट हुनु र आशिर्वाद थाप्नु । यस्तै योजना छ गायक हिमाल सागरको पनि दसैं योजना ।
धेरै अगाडिबाट सांगीतिक क्षेत्रमा होमिएर आफ्ना गीत–संगीतबाट स्रोताको मन जितिसकेका गायक हिमाल पछिल्लो समय पनि संगीतको क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रिय छन् । सुरुआती चरणदेखि नै स्रोताको मनमा डेरा जमाउन सफल हिमाललाई मैले दसैंका योजनाका बारेमा प्रश्न गरेको थिएँ । जसमा, उनले आफ्ना दसैं योजनाहरूलाई यसरी बेलिबिस्तार लगाए ।
दसैंमा कहाँ जाने योजना छ ?
अहिले म काठमाडौं छु र दसैंमा आफ्नो गाउँ झापातिर जान्छु । मेरो गाउँ झापाको बनियानी हो । यस अगाडिका दसैंहरूमा दसैं विशेष कार्यक्रमका लागि देशविदेश जाने गरेको भएपनि यसपाली झापा जान्छु ।
कहिले आउनुहुन्छ घर ? सायद, यता कार्यक्रम पनि छन् कि ?
पूर्वतिर दुईवटा कार्यक्रम छ । गाउँमै हुने उक्त कार्यक्रमका लागि मैले सेडुअल बनाएको छु । सम्भवतः आज या भोलिमा म आफ्ना परिवारसँग टीका लगाउनका लागि झापातिर जान्छु ।
दसैंमा मन पर्ने कुरा के हो ?
दसैंमा साथीभाईसँगको भेटघाट नै सबैभन्दा रमाइलो कुरा हो । मीठा–मीठा परिकार खाने, इष्टमित्रको आशिर्वाद लिने, लिङ्गे पीङ खेल्ने र रमाइलोका लागि तास खेल्ने भएकाले नै दसैं अन्य चाडभन्दा खास लाग्छ ।
कहाँ बसेर दसैं मनाउन मन लाग्छ ?
मलाई अरु ठाउँभन्दा पूर्व नै रमाइलो लाग्छ र जहिले पनि दसैंमा घर नै फर्किन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । किनभने आफू जन्मिएको ठाउँ सधैं रमाइलो नै हुन्छ । र, साथीभाईसँग पीङ खेल्दै दसैं मनाउनुको मज्जा नै बेग्लै छ ।